Qabeentoota dhangiiwwan addaan maxxansuu
Qabeentoota gabatee muraa irratti kuufaman dhangiiwwan garagaraa fayyadamuun galmeeke irratti maxxansuun ni danda'ama. LibreOffice keessatti qaaqa ykn sajoo gadbuusaa fayyadamuun qabeentoota akkamitti akka maxxansitu filachuu ni dandeessa.
Dirqaleewwan jireessii qabeentoota gabatee muraa irratti hundaa'u.
(Ajaja+DirqalaCtrl+Alt)n, keewwata ammee ol yk gad siqsa.
Baafata sajoo fayyadamuun qabeentoota gabatee muraa maxxansuu
Baafata banuuf Kabala Waaltina irraatti xiyya sajoo Maxxansitti aaneen jiru cuqaasi.
Dirqalee keessaa tokko fili.
Argamataa yoo hin jaallane ta'e, sajoo Gaabbi cuqaasi, ittaansii dirqalaa birootiin maxxansi.
Qaaqa fayyadamuun qabeentoota gabatee muraa maxxansuu
Gulaali - Maxxansa addaa fili.
Dirqaleewwan keessaa tokko filadhuuti Tole cuqaasi.
Wardii keessa jirta yoo ta'ee fi qabeentoonni gabatee muraa man'eewwan wardii yoo ta'an, qaaqni garabiraa Maxxansa Addaa mul'ata. Dirqaleewwan bu'uuraa ykn ol'aanaa fayyadamtee man'eewwan galagalchuuf qaaqa Paste Special fayyadami.
Transposii: tardaalee fi tarjaalee hammanga man'ee maxxansamani wal jijjiira.
Geessituu: hangii man'ee akka geessituutti maxxansa. Faayiliin maddaa yoo jijjiirame, man'eewwan maxxansamanis ni jijjiiramu.
Dirqaleewwan biroo gargaasa keessatti ibsamaniiru, qaaqa Maxxansa Addaa kan LibreOffice Calc keessa yoo waamtu.
Title is: Qabeentoota dhangiiwwan addaan maxxansuu